Andro: 11 Febroary 2020
Niditra tamin'ny vanim-potoana vaovao toy ny oram-baratra ny ekipa Métopolitan'ny Kaominaly Metropolitan. Tamin'ny hazakazaka telo voalohany tamin'ny vanim-potoana vaovao, ny ekipan'ny bisikileta Metropolitan, izay nandresy volamena 3, volafotsy 3 ary medaly alimo 1 ary tsy niala teo amin'ny dabilio, dia koa ny iraisam-pirenena. [More ...]
Gazety tamin'ny 11 febroary 2020 nataon'ny filohan'ny TMMOB Emin Koramaz mikasika ny fomba ara-dalàna natolotry ny minisiteran'ny tontolo iainana sy ny fanentanana momba ny fanapahan-kevitra tsara momba ny tetikasa Kanal Istanbul [More ...]
Fa maninona no tokony hijanona ho toy ny toeram-pitobiana ny Station Station Haydarpaşa, fa tsy trano fandraisam-bahiny, tranom-bakoka, tranom-pivarotana na zavatra hafa? Maniry mafy izahay izany fangatahana izany. Ny fisisihanay dia avy amin'ny zava-misy fa tsy toerana i Haydarpaşa Station. Ankoatr'izay, ny fampiasana an'i Gar [More ...]
Ben'ny tanànan'i Melikgazi izay nanambara fa hihoatra ny lalana mankany amin'ny fiampitana làlamby ho an'ny fitaterana azo antoka sy serivisy. Mustafa Palancıoğlu; Mba hampandehanana ny fifamoivoizana haingana dia haingana, mahomby ary azo antoka, maro avy eto an-tanàna [More ...]
Ao Torkia tamin'ny taona 2019 1 348 729 trano fivarotana vokatra niova tanana. Raha ny 57,5% amin'ireo trano amidy dia entin'ny lehilahy, 31,2% ny vehivavy, 1,8% ny lehilahy ary vehivavy, 9,5% no ivelan'ny trano [More ...]